အစိမ်းရောင်စခန်း - Bag, ပျော်ပွဲစားစောင်, သဲသောင်ပြင်သုတ်ပဝါ Sleeping waterproof စခန်းတဲ,
အသစ်သောဇုန်ထဲကနေအလားတူ & link ကို pas
အရည်အသွေးမြင့်မား ultralight mummy အိပ်ပျော်နေတဲ့အိတ်
က Canvas အိပ်ပျော်နေတဲ့အိတ်
တဲရေစိုခံရှိမရှိထည်၏မည်မျှရေကော်လံသာဆက်စပ်မရှိ, အရေးအပါဆုံးဒီဇိုင်းနှင့်လက်ရာဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာလွယ်ကူသောအသံပေမယ့်ဈေးကွက်တွင်ရွက်ဖျင်တဲတွေအများကြီးရေစိုခံသည်မဟုတ်, ပင်ရေကော်လံ 5000mm ဖော်ပြခဲ့တယ်။ အချိန်မရွေးမုနျတိုငျးမှအလင်းမိုဃ်းကိုရွာစေရှိသည်ဖို့ဖြစ်နိုင်စေရသောမိုးလုံလေလုံမိုဃ်းကိုရွာစေစမ်းသပ်ကိရိယာများ, များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ကပြီးပြည့်စုံရေစိုခံတဲကိုထုတ်လုပ်နိုင်မှကျွန်တော်တို့ကိုသေချာစေရန်တစ်စုံတစ်ရာပေါက်ကြားဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှာဖွေကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်။
သင့်ရဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့အိတ်၏အပ်ချုပ်ဆောက်လုပ်ရေးကဘာလဲ? သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သည်မထိုက်မတန်ကောင်းသလော သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသင့်ရဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့အိတ်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီဆောက်လုပ်ရေး၏အင်္ဂါရပ်အတှကျအသုံးပွုသောဆောက်လုပ်ရေးပြောပါသလား ပုံမှန်အားဖြင့်အတူတူတိုက်ရိုက် shell ကို, insulator တွင်လည်းနှင့်နံရံချုပ်, အဲဒီမှာစျေးကွက်အပေါ်2ကွဲပြားခြားနားတည်ဆောက်မှုများ, အဆိုပါ H ကိုအခန်းထဲကဖြစ်ကြပြီးနှစ်ဆ H ကို chamber.The H ကိုကုန်သည်ကြီးများအသင်းအရိုးရှင်းဆုံးနဲ့လူသိအများဆုံးဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ဆောက်လုပ်ရေးများသောအားဖြင့်နွေရာသီ-နွေဦးမော်ဒယ်များများအတွက်အသုံးပြုသည်။
သငျသညျအထဲမှာဘာ, သင့်ပျော်ပွဲစားစောင်များမည်မျှအလွှာကိုသိသလား? တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားသောပျော်ပွဲစားစောင်၏အင်္ဂါရပ်ကဘာလဲ? ဒါဟာပုံမှန်ဒီလမ်းအတွက်လုပ်ပါ။ acrylic ထိပ်တန်းပစ္စည်းများအဖြစ်အရောင်အသွေးစုံမွေး & ပုံနှိပ် polyester, PE & လူမီနီယံသတ္တုပါး, PEVA, အောက်ခြေအဖြစ်ရေစိုခံ Oxford ။ အလယ်တန်းပစ္စည်းအဖြစ်ရေမြှုပ် & polyester ဖိုင်ဘာ။ ပျော်ပွဲစားစောင်၏အချို့သာ2အလွှာရှိပါတယ်။ သငျသညျမပြဿနာရဲ့, ငါတို့အဘို့, စျေးကွက်အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများတွေ့ပါလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ငါငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အညာဘက်ကို item များယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြစ်ကြောင်းကို, ကွဲပြားခြားနားသောပျော်ပွဲစားစောင်ထက်ပို 1,000,000 ထုတ်လုပ်ရန်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, FAQs မှာစစ်ဆေးသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
1, beitang စက်မှုပန်းခြံ, hehai လမ်း, Changzhou, Jiangsu ပြည်နယ်, တရုတ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်း